ओमकार टाइम्स फेसबुक चलाउनेहरुलाई १० टिप्स: के गर्ने के नगर्ने ? – OMKARTIMES
फेसबुक चलाउनेहरुलाई १० टिप्स: के गर्ने के नगर्ने ?
फेसबुकमा तपाईंले के गर्नुहुन्छ वा के लेख्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईंको व्यक्तित्वको परिचय दिन्छ । तसर्थ फेसबुक खोल्नासाथ आफू को हुँ भनेर सोच्नुहोस् र फेसबुक चलाउनुहोस् । यहाँ फेसबुक नियमित चलाउनेहरुका लागि केही सुझाव प्रस्तुत छन्, हेर्नुस् :
३. ‘मेरो मनमा के खेलिरहेको छ’ टाइपका स्टाटस नलेख्नुस् । उदास छु, दिक्क लागेको छ, चिन्तामा छु, पेट दुःखेको छ, जस्ता स्टाटस लेखेर समाजमा निराशाको धुँवा नछोड्नुस् । समाजमा तपाईंजस्ता एक्लै हुने र अलगावमा रुने मान्छे मात्रै छ्रैनन् । एक्लोपन हटाउन साथीलाई भेट्नुस्, आफन्तकहाँ जानुस् । पुरानो साथीलाई फोन वा इमेल गर्नुस् । फेसबुक तपाईंको रोइलो सार्वजनिक गर्ने ठाउँ होइन ।
५. कोही कोही आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकालाई फेसबुकमा धम्की दिइरहेका हुन्छन्, फकाइरहेका हुन्छन्, कसैलाई सम्झाइरहेका हुन्छन् । फेसबुक तपाईंको निजी जीवन देखाउने ठाउँ होइन । आफ्नो ब्वायफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्डलाई चिया वा कफी पसलमा बोलाएर आफ्ना कुरा सुनाउनुस् । श्रीमान् वा श्रीमती घरबाहिर हुनुहुन्छ र उनलाई सम्झाउने हो भने फोन गर्नुस् वा इमेल लेख्नुस् । फेसबुकको वालबाट दुनियाँलाई टेन्सन नदिनुस् ।
९. फेसबुकमा हारेका, थाकेका, चिन्तित भएका, हतोत्साही भएका र कुण्ठित व्यक्तिहरु धेरै सक्रिय छन् भनिन्छ । सबैभन्दा धेरै निराश र कुण्ठितहरु नै अरुलाई गाली गर्ने, अपशब्द बोल्ने, सराप्ने गरेर आफ्नो आत्मतुष्टि पूरा गर्ने गर्छन् । नेताहरुका नाम लिएर गाली गर्ने, अरुका स्टाटसमा बहस होइन, गालीगलौजमा उत्रनेहरु स्वस्थ मानसिकताका मान्छे होइनन् । तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तर्क गर्नुस्, विचार राख्नुस्, तथ्यहरु पेश गर्नुस्, गालीगलौज गरेर झगडालु वा कुण्ठित नदेखिनुस् ।